China Kupisa kwekuyera mudziyo vagadziri uye vanotengesa | Chapman
Muforoma NO. CPM-181013
Pamusoro Pedza Maitiro VID21
Zvinyorwa zvePurasitiki PC + ABS
Chikamu uremu 23g
Chikamu chemazana 125.00 X 63.00 X 22.00mm
Kushanda Indasitiri yezvokurapa
Saizi yekukura 346 X 396 X 337mm
Chikamu Zita Kupisa kudzora pfuti
Muforoma mhango 1 + 1
Lead Nguva 25mazuva
Muforoma Kutenderera Nguva: 28's
Kure: Iko kushandiswa kwekutanga kwema infrared thermometer kuri kuyera tembiricha yechinhu kubva kure. Chigadzirwa chinobatsira mumamiriro ezvinhu apo zvakaoma kusvika pachinhu kuti chinyore kupisa.
Semuenzaniso, IR thermometer inogona kuuya inobatsira kana ichiyera tembiricha yemhepo inogadziridza zvikamu izvo zvisingawanzo kusvika. Iwe unogona zvakare kushandisa Infrared thermometer kuongorora mashandiro einjini kutonhodza masisitimu kana kuona hotspots pamagetsi masisitimu uye mapaneru ane mashoma mukana.
Zvinotyisa: Kuyera tembiricha iri kure kune zvakwakanakira. Haasi ese tembiricha anogona kuyerwa nekunangana nekuonana nayo. Mumwe muenzaniso wakadai kuvesa moto.
Vanodzima moto vanowanzo shandisa IR thermometer kuti vaone hotspots kana paita moto. Midziyo iyi inovagonesa kuwana mhedzisiro chaiyo pasina kuisa hupenyu hwavo panjodzi.
Imwe isiri-yekudyidzana thermometer application iri mukutarisa zvigadzirwa zvemabhizimusi senge mabhaira, maficha, uye yakanyanya-tembiricha maitiro mapombi. Nemidziyo iyi inochengetwa nemaoko, vashandi vanogona kutarisa zvirinani maficha eaya masisitimu akakwidziridzwa pasina kuonana.
Kuyera tembiricha munzvimbo dzine chepfu kana dzine njodzi zvinokwanisika nemidziyo iyi. Nekudaro, kuwana iyo chaiyo IR thermometer yakatemerwa iyo chaiyo muenzaniso kwakakosha kune chaiyo tembiricha kuverenga mune chero eaya mafomu.
Kufambisa: IR thermometers zvakare ari ehupfumi esarudzo yekuyera tembiricha yezvinhu zviri kugara zvichingofamba. Sezvo izvi zvishandiso zvichiteerera zvakanyanya, pane zvishoma zvekunonoka kunyoresa misiyano yetembiricha. Saka nekudaro, ma IR thermometer akakosha kuyera tembiricha yezvinhu zvinofamba sezvo kumhanya kwechinhu kusinga tsvete mhinduro.
Mienzaniso inogona kusanganisira kuyera tembiricha yemabhanhire ekuendesa mune yekugadzirisa nzvimbo, michina inofamba, ma roller, uye zvimwe zvinofamba zvinhu panodiwa tembiricha.
Pashure: Bank kadhi kadhi Pos muchina
Zvadaro: 34 uye 4 pini yekubatanidza